U Isticmaalka Dawada Sida Saxda AH. Nin dhallinyaro ah 02:33 Waxan u socdaa dhakhtarka si laygaga talaalo cudurka beerka. - PDF
Download "U Isticmaalka Dawada Sida Saxda AH. Nin dhallinyaro ah 02:33 Waxan u socdaa dhakhtarka si laygaga talaalo cudurka beerka."
1 MEDICIN MED FORNUFT Dialogliste - Somali Intro U Isticmaalka Dawada Sida Saxda AH Familie i skov Vox pop med personer foran Apotek Speak 02:17 Markii horeba ama ilaa wakhtigii horeba waxad ka bini aadam ahaan u baahan tahay dawo. Waxad noqon kartaa qof gaboobay, laakin waxad noqon kartaa xitaa dhallinyaro. Hooyo timo tidcan leh 02:30 Hadda ayaan farmasiiga ka imid oo aan soo iibsanayey biyaha lagu luqluqdo. Nin dhallinyaro ah 02:33 Waxan u socdaa dhakhtarka si laygaga talaalo cudurka beerka. Naag waayeel ah 02:37 Maalin kasto ayaan qaataa si uusan iigu dhicin wadne xanuun Nin oday ah oo fareesh ah 02:41 Daawada kaliya, ee aan isticmaalo waa, hal galaas oo kahmri kulul ah maalin walba. Gabar dhallinyaro ah 02:44 Ma isticmaalo inta badan, laakin waa fiican tahay inay guriga taalo. Naag dhallinyaro ah 02:48 Waligey dawo ma isticmaalo. Speak 02:52 Daawadu waxay ka hortagtaa cudurada sidoo kalena waxaa lagu daaweyaa cudurada ama astaamaha cudurada. Sida cudurada qaabab kala duwan qof walba ugu yaqaan, ayey cuduradu noqon karaan kuwo kala duwan dhaqan ahaan. Medicin før og nu Gamle billeder af behandling med planter og urter og andre historiske arkivbilleder Speak 03:15 Ilaa inta aynu ognahay waxaa cudurada lagu daweeyaa dawo Waxa loo tagi jirey nimanka daweeya dadka ama faaliyayaasha, halkaas oo dadka lagu daweyn jiray dhirta qoyan ama falal aaminaadeedka caqiido. Waxa ay aheyd markii ugu horeysey 1840 kii markii cilmiga dhakhtarnimo, ee maanta aan naqaano uu bilowday. Wakhtigaa ka hor farqi weyn baa u dhexeeyey kuwa, qalliinada ku sameeya bukaanka iyo dhakhaatiirta bixisa dawooyinka. Konservator fortæller fra gammelt Apotek i Medicinsk Ion Meyer, konservator 03:45 Waxa laga furay farmasiigii ugu horeeyay Kobenheegan Waxa uu ahaa farmasii wax yar ka bedelan farmashiyayaasha, manta aan naqaano. Side 1 af 17
2 Museion Tusaale ahaan waxa lagu iibin jiray waxyaabaha raashinka lagu carfiyo, khudradda macaan, nacnac luubaani iyo shukulaato. Laakin farmasiiyada waxaa ku yaalay xilligaa sheybaar, lagu sameeyo daawooyinka laguna iibiyo. Maanta qiyaastii 250 farmasii ayaa ku yaal wadanka. Laakin uma soo saaraan wax dawo ah farmasiiga. Maanta dawooyinka waxa sameeya shirkadaha waaweyn ee dawooyinka. Speak 04:22 Maanta waxan noolaanaa wakhti dheer marka loo eego xilliyadii hore waxana laga helaa aduunka dawooyin badan. Maalinkasta waxa la helaa qaab cusub oo loo daweeyo cudurada. Dalkan Denmark waxa ka jirta wasaarad, ku shaqo leh hawlaha caafimaadka iyo ka hortaga. Waxana hoos yimaada wasaaraddan maamulka dawooyinka, waana iyaga kuwa kontoroola ee ogolaada dawooyinka oo dhan. Steffen Bager, middelstyrelsen 04:45 Iyadoo ay la jirto hey adda dawooyinka ee Yurub ee London, ayey Maamulka dawooyinku mas uul ka yihiin dhammaan dawooyinka, laga helo suuqyada Denmark. Marka dawo la ogolaadana, taa macnaheedu waxa uu yahay, in la qiimeeyey oo la koontoroolay qiimaha, yacnihii waxa ku jira oo la qiimeeyey saameynteeda, hubaalnimada dawada, iyo sidoo kale waxa la qiimeeyey wax- tarkeeda, yacnihii dawadu in ay shaqeyneyso. n I konsultation hos lægen, patient bliver undersøgt Iyo haddii maamulka dawooyinku uu arko dawo laga ganacsado oo loo iibiyey sida dawo neef ama lafa xanuun ahaan, oo runtiina aan aheyn dawo la ogolaaday, markaa waa la joojinayaa iibkeeda, inta dawadaasi laga ogolaado ee ay noqonayso dawo sax ah oo la ogol yahay. Flemming Skovsgaard, læge 05:31 Wadankan Denmark waxa ay qaadaataa lix sano in la barto dhakhtarnimo. (Haa, waana inaan neefta hore iyo gadaal u qaadataa (dhib u adkeysataa). Oo markaa dhakhaatiirta oo dhami waxa ay qaadatataa takhasus. Dhakhtarkaagu xataa waxa uu yahay dhakhtar leh takhasus. Waxa uu dhab ahaantii bartay daweynta caadiga ah, oo ah sida loogu yeedho. Mor på vej til lægen Speak 05:50 Marka qofku uu xanuunsado ee uu u baahdo dawo, waa inuu la xiriiro dhakhtarkiisa. Waa inuu qofku mar walba xusuustaa inuu wato kaarkiisa caafimaadka, marka uu dhakhtarka u tagayo. Dhakhtarka waxa aad ka ogaan kartaa, waxa ku haya. Qofku waa inuu wakhti ka dalbadaa dhakhtarkiisa, haddii qofku aanu iman karin, waa inuu xusuustaa inuu waco oo iska baajiyo ballanta, si qof kale uu wakhtigiisa u gelo. Side 2 af 17
3 giver patient diagnose og tolk hjælper med at oversætte 06:17 Waxaan ka helay infakshan yar sambabadaada. Tolk Ha encontrado una pequeña pulmonia. Patient Que es lo que tengo que hacer? Flemming Skovsgaard, læge 06:28 Haddii aad u baahan tahay turjubaan xilliga aad la kulmeyso dhakhtarkaaga, waa muhiim, inaad u sheegto wakhti hore dhakhtarkaaga, si uu hakhtarkaagu uga gaadho inuu kuu ballamiyo turjubaan leh luqadaada saxda ah. Qof kasta oo u baahan turjubaan marka uu dhakhtarka la kulmayo waxa uu heli karaa turjubaan. Turjubaanada ay dhakhaatiirtu isticmaalaan, waa turjubaano shaqada aad u garanaya waxana wanaagsan, in ay iyagu yihiin, kuwa kuu turjubaaana intii aad soo wadan laheyd, tusaale ahaan xaaskaaga ama odaygaaga amaba carruurtaada. Turjubaanku waxa uu ilaaliyaa xogta, si waxa aad u sheegtay dhakhtarkaaga, aaney ugu gudbin cid kale. 06:59 Waa inaad heshaa benishilin, aad qaadaneyso saddex jeer maalintiiba ilaa hal todobaad. Tolk Nesecitas penecilina, que te va a dar. Y tienes que tomar una pastilla tres veces por dia, por una semana. Patient Puedo ir a trabajar? Tolk 07:12 Ma tagi karaa shaqada? Haa, waad tegi kartaa, marka ay xumadu kaa dagto. Apoteket Tyrkisk kunde køber medicin på apoteket og får hjælp af tyrkisk personale Tolk Quando no tienes febre si puedo ir a trabajar. Speak 07:33 Farmasiiyada ayaa laga bixiyaa oo laga gataa daawooyinka. Farmaceut 07:41 Hore dawo ma u qaadaatay? Kunde (Maya.) Farmaceut 07:44 Waxad u qaadan kartaa dawada kaniin ahaan ama sharoobo ahaan. Side 3 af 17
4 Kunde (Haa, laakin ma fahmin.) Farmaceut 07:52 Ma ku hadashaa af Turki? Kunde (Haa, af Turki) Farmaceut (Haa, wax yar sug, Fadime.) Tyrkisktalende farmaceut Merhaba Kunde Merhaba Speak 08:04 Shaqaaluhu waxa ay kuu sheegi karaan, sida aad u isticmaaleyso dawada iyo sida ay u shaqeyneyso. Speak 08:13 Farmasiiyada qaarkood waxa ay shaqaaluhu kugu caawin karaan luqado badan Farmaceut fortæller om apotekets rolle og personalet på apoteket Susanne Mathiassen, farmaceut 08:27 Shaqaalaha, aad kula kulanto farmasiiyadu, waa shaqaale leh xirfad. Waa farmasiistayaal, leh waxbarasho jaamacadeed ama cilmi farmasiiyeed. Farmasiilenimadu waa cilmi akadeemiyadeed. Shaqaalaha farmasiiyada ayaa ku siin kara talobixin ku saabsan dawadaada. Waxa ay kuu sheegi karaan, sida dawadu u shaqeyneyso iyo in ay dawadu u shaqeyneyso si ku filan. Maxaa yeelay arrinku waa, hadba inta aad ka taqaano dawada ee aad ka isticmaasho, ayey dawadu wax kuu taraysaa. Hvad er medicin? middelstyrelsens anvisninger om, hvad medicin er. Hvordan det kan forebygge, helbrede og lindre sygdomme eller symptomer på sygdomme Speak 09:01 Inta badan dalkan Denmark dawooyinka waxa laga iibsadaa farmasiiyada, laakin waayadan dambe waxa ay noqotay arrin caadi ah in laga iibsado dawo, aan loo baahneyn rasiidh suuqyada waaweyn amba meelaha kale ee ganacsiga xorta ah, balse uun kaliya baakado yar yar iyo koobab. Maamulka dawooyinka, ayaa go aamiya, cidda iibin karta dawooyinka aan risiidhka u baahneyn, iyo nooca dawada rasiid la aanta la iibin karo iyo meesha. Speak 09:33 Ka hor inta aanu qofku dawada istcmaalin, iyo ka hor inta aanu dhab ahaan u isticmaalin, waa muhiim in qofku ogaado, dawadu waxa ay tahay. Side 4 af 17
5 Steffen Bager, middelstyrelsen 09:41 Maadooyinka, yacni dawada, waxa lagu qeexaa badeeco, wax ka hortagi karta, xanuunka yerayn karta, ama daweyn karta cudur. Speak 09:51 Dhammaan dawooyinka, aad isticmaasho, jidhkaaga ayey saameyn ugu yeeshaan si uun. Ulajeedaduse dabcan waa, inaad ku ladnaato. Steffen Bager, middelstyrelsen 10:00 Taa macnaheeduna waa, tusaale ahaan haddii qofku uu u safrayo meel, ay ka jirto kaneeco/malaariyo, markaas qofku wuxuu qaadan karaa kaniiniga malaariyada, si aanay ugu dhicin malaariyo. Waa la is talaalaa, sida aan ku naqaan barnaamijka tallaalka carruurta, kaasoo horjoogsada, in caruurta ay ku dhacaan cudurada qaarkood. Sidoo kale waa la yareyn karaa yacni waxaad qaadan kartaa dawooyin, yareeya xannuunka, ku haya. Waxaad noqon kartaa qof uu hargab hayo, waxad qabi kartaa xannuunada qaarkood. Markaa waxad qaadan kartaa kaniini madax xanuun amba san-buufis, waxoogaa fura sankaaga oo, sidaas ayaad ku yareyneysaa laakin weli hargebkii waa uu ku hayaa. Waad iska daweyn kartaa cudur. Waad iska joojin kartaa, in cudur ku sii hayo. Waxa laga yaabaa inaad qaadato waxoogaa benishiliin ah, si bakteeriyada jidhkaaga ku jirta loo dilo, haddii aad qabto xanuunka sambabada. Speak 10:49 Qaabab kala duwan ayaa dawada loo helaa. Tusaale: budo, siboosto, kiriim, kaniiniyaal, kaniiniyada la qaso iyo irbado. Person fra middelstyrelsen fortæller om begreberne lægemidler og medicin samt om hvilke produkter, der er omfattet af hvad Steffen Bager, middelstyrelsen 11:07 Inta badan marka qofku iibsado dawadiisa, wuxuu arkaa qofki erayga maado dhakhtareed. Sidaas waxa loo yeelay, waayo maaddo dhakhtareed waa erayga loo yaqaan sida caanka ah, halka ay dawo ka tahay eray la isticmaalo maalin walba. Speak 11:20 Dawooyinka waxay kaloo ay noqon karaan daawo dabiici ah iyo fitamiino adag iyo macdanaha. Farmasiiyada xataa waxa laga helaa waxyaabo kale sida, waxyaabaha lagu kaabo raashinka oo uu maaamulo kontoroolana maamulka raashinka, iyo soo saarayaasha waxyaabaha laysku qurxiyo, oo ay maasmusho wasaaradda bii addu. Daawooyinka dabiiciga ah waa qaar ka mid ah dawooyinka, oo ka kooban maadooyinka dabiiciga. Waxay noqon karaan, ka yimaada dhirta, xayawaannada, amaba macdanaha. Kaliya waxa loo ogoladaa xannuunada yar yar. Waxay noqon karaan hargabka, calool istaaga, dheefshiidka oo adkaada ama infakshanka ku dhaca kaadi mareenka, wax qofku uusan caadi ahaan dhakhtar ula tagin. Tusaalooyinka dawooyinka dabiiciga ah waxay noqon karaan saliidda malaayga, caleen, ubaxa jaalaha ama cagaarka guduudan. Side 5 af 17
6 Medicin, hvornår? Speak 12:20 Mar walba ma aha, in qofku u baahan yahay dawo. Mor kommer til lægen, hvor hun bliver undersøgt for halsbetændelse (Maalin wanaagsan Asli.) Flemming Skovsgaard, læge 12:26 Haddiise uu u baahan yahay, waa muhim, in qofku u yimaado in la daweeyo sida ugu dhakhsaha badan oo suurtogal ah. (Maxaan kaa caawiyaa?) Patient 12:33 Waxaa i xanuuneya cunaha waanu i xanuuneyaa, marka aan wax liqayo. Sidaas daraadeed waxa aan is lahaa bal in aad dawo hesho. 12:40 Ilaa muddo intee le eg baad xanuunsaneysey? Patient Hadda waxan jiranahay ilaa dhowr maalmood, ilaa 3 maalmood. 12:46 Marka waxan u maleynaa, inaan ka billaabayo inaan eego cunahaaga xaga hoose. Speak 12:50 Ka hor inta aanu dhakhtarku aanu dawo qorin, waxa uu doonayaa inuu kuu baadho si buuxda. (Afka kala qaad.) Argh Patient Argh 13:02 Haa, waxaa ku yar cas cunaha xaga hoose. Ma sheegi karo inay tahay infakhshan bakteeriyo ama infakshan feyras, marka aan fiiriyo gudaha dhuuntaada. Sidaas darteed waa inaan qaadaa tijaabo bakteeriyo. Patient (Oky) (Afka kala qaad mar kale.) Side 6 af 17
7 (Argh) Patient (Argh) Mor får sin diagnose af lægen 13:24 Haa, waad aragtaa, kaliya waa hal xariijin, marka waa infakshan feyras. Marka binishilin ma ku caawin karto. Wax badan kama qaban karo. Sida ay h u muuqato hadda ma soo gaabin karno xanuuunka. Waxa ay qaadaneysaa qiyaasti 3, 4, 5, 6, 7 ka hor inta aad bogsaneyso haddana. Speak 13:41 Haddii aad xanuunsanayso, calaamahada xanuunku ay ka sii daraan, ama aadan u arkin, inaad reysatay wakhtigii la rajeynayey, waa inaad la xidhiidhaa dhakhtarkaaga caadiga ah. Waxa ay noqon kartaa mid ku adag reerka iyo saaxibada iney fahmaan, haddii qofku uu qabo xannuun maskaxda ah. Wey fududahay in la fahmo, in uu qofku aanu ka qeyb-qaadan karin wixii, uu qaban jiray maalin walba, haddii ay lugi ka jabtay. n fortæller om forskellene fra kultur til kultur Lev sundt, dyrk motion og spis rigtigt opfordres der til Flemming Skovsgaard, læge 14:12 Dalalka qaar iyo dhaqamada qaar waa qaali, in loo tago dhakhtar iyo in la tago cusbitaal, sidaas darteed waa wax ku kooban dad yar. Nasiib wanaag Denmark waxan leenahay caawimaad dhakhtareed oo bilaash ah iyo cisbitaal isaguna lacag la aan ah, sidaas darteed dadkoo dhan waa isku xaq inay isticmaalaan, marka ay xanuunsan yihiin. Speak 14:34 Ma ahan oo kaliya dhakhtarka, kan ka mas uulka ah, inaad caafimaad qabto. Haddii qofku u noolaado qaab caafimaad, wuu iska fogeyn karaa cudurada qaarkood, tusaale xannuunada bedela nolosha, buurnaanta, cadaadis maskaxeedka iyo sonkorta qeybteeda 2aad. Waa mas uuliyad shakhsi walba isaga saaaran, inuu ku dadaalo inuu ahaado mid caafimaad qaba, sidaas daraadeed waa muhim in la cuno raashin wanaagsan oo la sameeyo jimicsi inta badan. Håndkøb eller recept Forskellen på håndkøbsmedicin og receptpligt medicin og hvor medicin kan købes Sang af Grethe Sønck Speak 15:09 Daawooyinka waxaa laga iibsan karaa meelo kala duwan. årh, årh, årh, årh åååårh jeg må ha' medicin medicin medicin med det samme jeg må være rask så jeg kan tjene masser af penge årh jeg må ha' medicin medicin medicin med det samme jeg må være rask min skat forfalder om fjorten dage Side 7 af 17
8 Ingen tager piller bare for sin fornøjelse jeg må ta' nogen der hjælper på min fordøjelse den slags piller gør mig træt for trætheden tager jeg så en tablet så er jeg vågen og så må jeg prøve nogen der kan dulme og døve og sløve når jeg så er slumret hen så ska' jeg op og på'en igen Haddii aad u baahan tahay dawo, su aashu waa, daawo nooce ah ayey tahay inaad doorato. Daawooinka qaar waxad ka heleysaa dhakhtarkaaga. Inta badan waxa ay noqdaan dawooyin risiidh ku qoran. Kuwa kale waxa aad ku iibsan kartaa rasiid la aan. Maamulka dawooyinka, ayaa go aamiya, waxa gacanta laga iibsanayo, iyo waxa u baahan rasiidh. Apoteker (Waxaan qabanaa rasiidyada 24ki saacadoodba. Marka dhakhtarka ayaan wacayaa oo aan dib udhigayaa, markaas ma heleyno. Dib udhac aad ah ma jiro. ) Farmaceut fortæller om håndkøbsmedicin Far køber hovedpinepiller i supermarkedet Aslan Asghari, farmaceut 16:24 Dawooyinka gacanta laga gato waxa loo isticmaali karaa in lagu yareeyo astaamaha durayga, waxa kale oo loo isticmaali karaa ka hortaga xanuunka iyo dhibaatooyinka kale ee qofka jirkiisa heysta. Waxa ay noqon kartaa aragtida dadka qaar, in dawooyinka rasiid la aanta ah, waayo rasiid la aantu, markaa ma ahan halis. Taa sax maaha. Daawooyinka gacanta laga gataa waa halis, haddii qofku aanu u isticmaalin si sax ah. Far (Haye) Ekspedient (Maxaan kaa caawiyaa?) Far 16:49 Waxan doonayaa inaan iibsado baakad kaniiniga madax xanuunka ah. Ekspedient 16:55 (Halkaa hore tag bal.) Teebaad rabtaa? Far (Noocyadeed heysaa?) Ekspedien 16:58 Waxan heynaa Panodil, iyo waxan heynaa Ipren, Pamol og Kodimagnyl. Far 17:04 Waxan iska qaadanayaa Panodil. Ma heysid miyaa iyagoo baakado waaweyn? Ekspedient 17:08 Maya, farmasiiga u doono Side 8 af 17
9 Far (Haddaba tan baan iska qaadanayaa.) Ekspedient (okey.) Speak 17:13 Farmasiigu wuxuu hayaa dawooyinka gacanta laga iibsado oo badan marka loo eego kuwa, aad tusaale aah ka heli karto supermarkedyada. Ekspedient (Wax kale ma rabtid?) Far (Maya mahadsanid) Kunde (Marka iska bixi 9,50 karoone.) Speak 17:22 Si aad uga iibsato farmasiiga daawo rasiidh ku qoran waa inaad ka heysataa dhakhtarkaaga waraaq rasiidh ah oo sax ah. Mor får recept hos lægen Mor 17:28 Waxan ku fekerayaa, mar haddii aan halkan joogo, bal inaan cusbooneysiin karo rasiidhka kaniiniyaalkeyga xasaasiyada? 17:34 (Dabcan.) Sideed u rabtaa rasiidka? Ma warqad ahaan, mise farmasiiga ayaan toos ugu diraa? Speak 17:42 Waad geyn kartaa rasiidka adigu farmasiiga, laakin waxad dooran kartaa xitaa, indhakhtarku toos taleefanka ugu diro farmashiga ama uu ku diro kunbiyuutarka. Forklaring på, hvad en elektronisk recept er Aslan Asghari, farmaceut 17:58 Marka dhakhtarku uu ku diro rasiidhka kumbiyuutarka, waxa ay ka shaqeyneysaa farmashiiyada Denmark oo dhan. Haddii bukaanku dalbado, markaa dhakhtarku waxa uu ugu diriyaa farmasii gaar ah. Kunde 18:11 Waxan doonayaa inaan rasiidh u qaado Dorte Andersen. Apoteker 18:13 Ma wax dhakhtarku uu soo diray baa? Kunde henter elektronisk recept på apoteket Kunde 18:16 Waxa ay noqon kartaa mid kumbiyuutarka lagu soo diray. Apoteker (Ma wadataa kaarkaaga caafimaadka?) Side 9 af 17
10 Kunde (Haa, waakanaa.) Speak 18:21 Waa inaad mar walba la timaadaa kaarkaaga caafimaadka ama sheegtaa CPRnambarrkaaga ama magac iyo cinwaan, marka aad qaadaneyso dawo rasiidh ku qoran. Marka rasiidhkaaga la qaabilo, waxa lagu keydiyaa meel nidaam la hubo, oo ay ku keydsan yihiin macluumaadkaaga dawo. Nidaamkaas waxa aad ka geli kartaa sundhed.dk ee internetka. Apoteker 19:06 Waa inaad qaadataa kaniini barkiis habeen walba. Qiimuhuna waa 39,50 karoone Kunde (haa) Recept gemmes i medicinprofil Speak 19:13 Si aad u geli karto feylkaaga dawo, waa inaad heysataa saxiis shaashadeed, kaasoo ah nooc ka mid ah saxiixa Internettet. Feylka dawadaada waxad ka arki kartaa dhammaan dawooyinkii rasiidhka. Dhakhtarku wuxuu geli karaa xitaa feylka dawadaada, balse farmasiigu waa inuu adiga kaa heystaa ogolaansho. Si aad u hubsato oo uga hortagto in khalad loo isticmaalo, waad aardi kartaa, cidda booqatay feylkaaga. Danmark waxan leenahay shuruuc adag oo ku saabsan, waxa gacanta laga iibsan karo rasiidh la aan. Wadamada kale inta badan waa loo gadan karaa daawooyinka rasiidhka si ganacsi xor ah. Aslan Asghari, farmaceut 19:46 Qoku wax buu rasiid la aan ka soo iibsan karaa Spain, oo markaa uu iman karaa Denmark oo uu na tusi karaa baakadaas. Waxan ku khasbannahay inaan u diidno macaamiisha oo qofkaas u dirno dhakhtarka si uu ugu qoro rasiidh uu ku iibsado dawadaas mid la mid ah. Receptpligtig medicin og køb af medicin i udlandet og på internettet Speak 20:03 Waa inad sidoo kale si khaas ah uga taxadartaa, haddii aad dawo ka iibsaneyso Internetka. Waxa dhacda marar baddan inaaney gebi ahaanba sharci aheyn, islamarkaana waxa jirta halis weyn oo ah, in dawada aad iibsatay ay noqon karto mid aan jirinba. Marka ay ugu fiican tahay waa marka ay shaqeyneyso, balse marka ay ugu xun tahay waxa ay noqon kartaa mid keenta dhibaato. Brug af medicin Emballage, etikette og indlægsseddel forklares Speak 20:23 Mar walba waa inaad aad uga taxaddartaa, marka aad isticmaaleyso dawo. Baakada dusheeda waxa ku qoran magaca dawada, qaabkeeda, xitaa inay kaniini tahay, goojo ama boomaato, iyo sidoo kale loo keydinteeda. Haddii ay Side 10 af 17
11 tahay dawo rasiid la aan la gadan karo, xitaa waxa ku taal, sida dawada loo isticmaalo, iyo inta laga qaadanayo. Haddii dhakhtarkaagu ku siiyo rasiidh, waxa uu farmashigu ku dhejinayaa calaamad dawadaada. Halkan waxa ku qoran magacaaga, magaca farmashiga iyo taariikhda. Waxa ku qoran xitaa, inta qofku qaadan karo, inta jeer iyo muddada iyo tan ugu dambeysa, waxa dawadu kaa caawineyso. Sidoo kale waxaa la soo raaciyaa dawadaada waraaq. Waraaqdu waa talo bixin ku saabsan, waxa dawadu ka kooban tahay, sida ay u shaqeyso, sido loo keydinayo iyo haddii ay jirto saameyn. Farmaceut fortæller om vigtigheden ved at følge medicinanvisninger Susanne Mathiassen, farmaceut 21:16 Waa in qofku mar walba raacaa talada dhakhtarka ama farmasiiyada ee ku saabsan, sida qofku u qaadanayo dawadiisa, goorta iyo sida uu u qaadanayo, iyo ilaa muddada la qaadanayo. Haddii tusaale ahaan qofka loo sheegay, inuu qaato benasaliin ilaa wakhi, waa in uu markaa qofku qaataa benishiliinta ilaa wakhtigaas oo aanu joojinin isadoo dhex sii wada, waayo infakshanku wuu soo laaban karaa laganayaabee inuu ka sii daro, inti ay aheyd dhibaatadu, oo ay la jirto bakteeriyo, aaney benesaliintu wax ka tari karin intaa ka dib. Waxaa jira xitaa cuduro, qofka laga daweeyey, oo laga yaabo in qofku dareemayo caafimaad ilaa muddo. Tusaale ahaan, qofka dusha/korka wax ku leh wasakh aan ishu qabanin, oo markaa ay ka qarsoontay, markaa qofku moodaa, in uu iska daweeyey. Laakin waxa jira kuwo badan, oo ay tahay in la daweeyo ilaa 3 todobaad, haddii dkakhtarku ku yidhina waa in aad dawaysaa sadexdaasi todobaad, haddii kale wuu soo laabanayaa xanuunku. Sidaas si la mid ah haddii dhakhtarku ku yiri, waa inaad qaadataa benisaliini tusaale ahaan hal kaniini 3 jeer maalintii, waa in qofku uusan qaadan labanlaab oo uusan ku fekerin, inuu dhakhso caafimaadayo. Taas bedelkeeda waxa ay noqon kartaa halis in dawada aad labanlaabtay ama aanad sameyn, sidii dhakhtarku ku yiri. Speak 22:24 Dawada iyo waraaaqda warbixinta dawada isku meel dhig, si aad mar walba isaga fiiriso saameynta ama waxyaabaha kale ee loo baahan karo, marka aad isticmaaleyso daawadaada. Kunde afleverer medicinrester og ubrugt medicin på apoteket Kunde 22:34 Waxaan haayaa dawo gabowday, halkan ma keeni karaa? Apoteker (Haa, anigaa kaa qaadaya.) Speak 22:39 Daawoyinka aan la isticmaaleyn iyo dawada soo hadhay waa in lagu celiyaa farmasiiga, waayo waa marka hore e waxa ay wasakheyneysaa bii ada, haddii lagu rido bacda qashinka, marka xigta laakin xitaa dad kale iney helaan ma ahan. Side 11 af 17
12 Farmaceut på apoteket forklarer de forskellige former for hjælpemidler, man kan anvende, når man bruger sin medicin Susanne Mathiassen, farmaceut 22:51 Haddii ay kugu adag tahay inaad xukunto dawadaada, ama haddii aad qaadato daawooyin badan oo kala duwan, markaas farmasiiga ayaa qeybqeyb kuugu kala baakadeyn kara. Markaa waxa ay kuugu ridayaan bacyaal yar yar, oo magacaagu uu ku qoran yahay, iyo waxa ay dawadu tahay, iyo goorta aad qaadaneyso. Farmasiiyada waxa aad ka heli kartaa waxyaabo badan oo kaa caawiya dawadaada: Sida wax aad ku furto dhallada daawada, kaniini qeybiye aad ku kala qeybsato kaniiniyadaada iyo mid aad ku kala jebiso kaniiniga, haddii ay dhib kugu tahay inaad liqdo. Laakin waligaa ha kala jebin ama ha kala qeybin kaniini, inaad marka hore farmasiiga weydiiso mooyaane, waxa jira kaniiniyaal badan, oo aan u adkeysan karin. Bivirkninger Speak 23:30 Haddii aad u qaadato dawada si khaldan, waxa ay kugu keeni kaaraa, waa marka hore e inaaney u shaqeyn sidii loogu talo galay, amaba ay kugu reebto saameyn farabadan. Speak 23:46 Wax kasta oo caadi u shaqeeya, waxa ay noqon karaan wax si khaldan u shaqeeya. Saameyn xun ku reebid waa saameyn aan la jecleysan waa saameyn dhinac socota, marka qofku uu dawo qaato. Flemming Skovsgaard, læge 23:57 Dadku wey ku kala duwan yihiin, in dawadu ku yeelato saameyn xun ama aaaney ku yeelan. Speak 24:02 Tusaalooyinka saameynta dawada waxa laga magacaabi karaa madax xanuun, calool xanuun, cuncun ama shuban. n fortæller, at man på indlægssedlen kan læse om bivirkninger Forholdsregler Mor hos lægen i forbindelse med brug af flere slags medicin samtidig Flemming Skovsgaard, læge 24:08 Waraaqda macluumaadka dawada, oo ku jirta baakooyinka dawo kasta, ayaad ka akhrin kartaa saameynta laga yaabo in dawadu leedahay. Haddi aad la kulanto saameyn ku dhibta, waa inaad si dhakhso ah ula xiriirtaa dhakhtarkaaga. Speak 24:30 Dad badan baa u baahan daawooyin badan isku mar. Inta badan daawooyinku iyagu isma saameeyaan, laakin wey dhacdaa, in dawo ay xoojiso amab hoos u dhigto shaqada dawo kale. Waxa loo yaqaan isla shaqeyn. Mor 24:47 Waxan bilaabay inaan qaato waxoogaa kaniini hurdo ah. Caadi miyaa, inaan la qaato kaniiniga xasaasiyada? Speak 24:56 Inta aanad bilaabin inaad isticmaasho dawo cusub, waa inaad u sheegtaa dhakhtarkaaga, nooca dawada aad horey u qaadan jirtay. 25:03 Side 12 af 17
13 Haa, wax dhibaato ah ma leh, laakiin wey fiicnayd, inaad ii sheegto. Waa muhim in dhakhtarku og yahay wax walba, oo qofku qaato. Speak 25:09 Daawada waxaa laga heli karaa meelo kala duwan, tusaale dhinaca dhakhtarkaaga, dhakhtarka ilkaha ama cusbitalka, ama gacanka oo aad kaga gadato farmasiiyada, subermaarketyada ama dukaamada dabiiciga ee iibiya alaabta caafimaadka. Sidaas darteed mar walba ma aha hubaal, in ay dhacdo hubin toos ah oo ku aadan, sida daawooyinka kala duwan, ee aad qaadataa, ay isu saameynayaan. Haddii aad dawo ka iibsatay internetka si khaas ah ayey muhim u tahay, inaad u sheegto dhakhtarkaaga ama farmasiiga. Bogga internetka ee medicinkombination.dk waxad ka raadin kartaa warbixinnada ku saabsan, sida dawooyinka kala duwan isu saameeyaan. n fortæller, hvad der kan påvirke den medicin, man tager Flemming Skovsgaard, læge 25:51 Waa inaad ogaataa, in dawada, aad qaadataa, ay saameyn ku yeelan karaan tusaale ahaan waxa aad cunto ama aad cabto. Speak 26:07 Waxa jira xitaa dawooyinka qaar, ay tahay in qofku qaato xilliyo mucayan ah, tusaale raashinka ka hor ama kadib. Dawooyinka caajiska iyo kuwa halista u ah gaadiidka waxa lagu calaamadeeyey digniin saddex gees ah oo guduud/casaan ah. Haddii aad ku shaqeyneyso mashiin ama aad wadayso gaadhi, waa muhiim, inaad horey u sii tijaabisay dawada, si aad u og tahay, sida ay u shaqeyso. Aalkoolku waxa ay xitaa kicisaa oo kor u qaadaa qaab shaqeynta caajis noqosho ee dawada. Ha isticmaalin dad kale dawadiis, inkastoo aad u aragto, inaad isku calaamado tihiin. Astaamahaagu waxa ay yeelan kaaraan sabab kale, dawaduna waxa ay jirkaaga ugu shaqeyneysaa si kale. Dadkoo dhan wey kala duwan yihiin waana inloo daweeyaa si kala duwan. Waa mihiim inaad u sheegto dhakhtarkaaga wixii ku saabsan caafimaadkaaga, si aad u hesho daweynta dhabta ah. Ma ahan cudurada oo dhan, kuwa lagu daweyn karo dawo. (Haa laakin, igu salaan wiilasha.) Mor (Haye mahadsanid, nabadeey, nabadeey) Priser og tilskud (Hej, hej.) Speak 27:31 Side 13 af 17
14 Qiimaha dawadu wuu isbedeli karaa. Sida wax soo saarradu u kala duwan yihiin, laakin xataa wax isku nooc ah ayaa kala qiimo noqon kara. Farmaceut fortæller hvorfor priserne på medicin ændrer sig Aslan Asghari, farmaceut 27:40 Halkan farmasiiga waxan aragnaa, in macaamiishu ay la yaabaan, iney bixiyaan qiimayaal kala duduwan marba marka ka dambeysa isla dawo hal nooc. Apoteker 27:50 Hoo, qiimuhuna waa 65,00 karoone. Kunde 27:55 Waxan rabaa inaan ku weydiiyo hal shey: markii ugu dambeysay waxan bixiyey isla dawadan 50,00 karoone. Sidee bey ku dhici kartaa, in hadda aan bixiyo 65,00 karoone Apoteker 28:04 Waxaa soo baxa qiimo cusub 14 maalmoodba. Isla markaana waxad ka arki kartaa risiidhka lagu siiyey, in uu jiro kala duwanaansho bersantayj, oo la xiriira ilaa intee baad bixineysaa. Hadba inta aad dawo badan iibsato, ayey rakhiis noqonaysaa. Haraagaagu wuxuu joogsadaa sanadkiiba mar, markaas ayaad soo bilaabeysaa haddana. Speak 28:33 Farmasiiyada waxa ku waajib ah iney kuugu deeqaan dawada ugu jaban, haddii dhakhtarkaagu aanu kuu doorin mid kale. Dadka qaar baa u adkeysta hal maaddo, kuwo kalena waxa ay ku fiican yihiin in ka badan hal, markaa ma ahan mar walba, inaad heleyso dawada ugu jaban xilligan. Dhakhtarka ayaa go aaminaya, laakiin had iyo jeer waa uu kula tashanayaa. Farmaceut fortæller om medicintilskud Aslan Asghari, farmarceut 28:52 Marka aad farmasii dheenish ah ka iibsato dawo ku qoran rasiid, markaas qaranku waxa kuu samaynayaa qiimo dhaaf inta badan daawooyinka. Haddii ay jiraan dawooyin badan oo la kala dooranayo, markaas qaranku waxa uu qiimo dhaafid ku sameeyaa hadba dawada ugu jaban. Haddii macmiilku dalbado dawo qaali ah, markaas macmiilka ayaa iska bixinaya farqiga u dhexeeya dawada ugu qaalisan iyo tan ugu jaban. Speak 29:20 Marka aad iibsato dawo ku qoran rasiidh, ceymiska dowladda ayaa sida badan bixiya qeyb ka mid ah kharashka. På kassebonen kan man se sin tilskudssituation Aslan Asghari, farmaceut 29:28 Mar kasta oo qof uu farmasiiga ka iibsado dawo ku qoran rasiidh dhakhtareed, waxa uu qofku ka arki karaa rasiidhka loo soo celiyo, inta qofku bixiyey, inta dowladdu ay ka caawisay, iyo qiimaha dawadu ku kacday guud ahaan. Speak 29:44 Dhakhtarkaaga iyo farmasiigaba waxad ka heli kartaa warbixinada ku saabsan xaaladahaaga qiimo jebinta dawo iyo sharciyadii ugu dambeeyey. Side 14 af 17
15 Bogga internetka ee sundhed.dk ayaad kala socon kartaa hadba inta aad istcmaashay adigoo u maraya feyl warbixineedkaaga. Børn og medicin Speak 30:05 Carruurta laftigoodu waxa ay u baahan karaan dawo. Sida hooyooyinka carruurta nuujiya iyo dumarka uurka lehba, waxa jira shuruuc khaas ah marka laga hadlayo carruur. Flemming Skovsgaard, læge 30:23 Qofna waa inaanu marna u isticmaalin dawo, asaga la siiyey, carruurtiisa. Waxa ay noqon kartaa halis. Sidoo kale waa muhim, haddii carruurtaadu xanuunsan yihiin, inaad u geyso dhakhtarka si loo baadho oo markaa loo ogaado, bal in ay wax dawo ah u baahan yihiin. Barn bliver undersøgt af lægen Kunde køber medicin til sit barn på apoteket og får vejledning af farmaceut 30:43 Wada fiican tahay. Dareere ayaa kaaga jira mid ka mid ah dhegaha. Wax laga sameyn karaa ma jiraan, iyaga ayaa iskood iskaga baaba aya. Far 30:53 Waxaan doonayaa inaan u iibiyo waxoogaa siboostooyin ah ilmaheyga. Apoteker 30:58 Ma xumad ayaa haysa? Far 31:02 Haa, xumad ayuu leeyahay, waxana ku dhacay xasaasiyad. Apoteker (Okay, waa imisa jir isagu?) Far 31:05 15 biloo d buu jiraa. Apoteker 31:08 Arrinku waxa uu yahay, haddii carruurta da doodu ka yar tahay2 sano, qofku kaligii ma ahan inuu ku bilaabo in uu siiyo dawo xumada jebisa, waxa dhici karta in ilmuhu qabo wax kale. Tan ugu fiican waa, inaad u geyso dhakhtarka, isaga ayaa qiimeynaya, waxa uu noqon karo xanuunka ilmaha. Speak 31:26 Jirka carruurta iyo xubnahoodu waxa ay sameeyaan falcelin ka duwan kan dadka waaweyn. n fortæller om medicin til børn Flemming Skovsgaard, læge 31:30 Haddii carruurta dawo la siinayo, waa inay noqotaa xaddi khaas ah, oo loogu talo galay da dooda iyo culeyskooda. Lama siin karo carruurta rooroon kala bar inta dadka waa weyn loogu talo galay. Speak 31:43 Dawooyinka qaar waxa ay u sameysan yihiin qeyb-qeyb, kuwaas oo khaas Side 15 af 17
16 ahaan ku haboon carruurta tusaale dawada sanka lagu buufiyo iyo dawooyinka xannuunka. Dawooyinka gacanta laga iibsado qaarkood waxa ku dul qoran digniin ku saabsan, in loo isticmaalo kaliya carruuta kadib marka dhakhtarku ogolaado. Børns nysgerrighed, vær forsigtig Flemming Skovsgaard, læge 32:01 Carruurtu waa kuwo jecel inay wax walba ogaadaan oo doonaya inay wax walba dhedhemiyaan, sidaas darteed xataa waxa ay samayn karaan in ay dhadhamiyaan dawo hortooda taala. Dawada waxa lagu khaldi karaa xitaa nacnac. Sidaas aawadeed waa muhim, in dawada aad saarto meel, caruurtu aaney gaadhaynin. Sida aad meel sare u saarto kiimikada iyo dawooyinka nadaafadda. Speak 32:26 Inta badan shilalalku waxa ay ka dhacaan dawooyinka, aanu qofku u heysan inay yihiin dawo dhab ah, tusaale fiitamiinada, kaniiniyalka feerada iyo xanjada nikotiinka. Flemming Skovsgaard, læge 32:26 Dawo ha ku qaadan ilmahaaga hortiisa, maxaa yeelay carruurtu waxa ay ku daydaan waalidkood oo waxa ay sameyn karaan inay qaataan dawada sidaada oo kale. Mere oplysning Speaken fortæller om de mange steder, man kan finde information om medicinbrug Speak 32:46 Haddii cunugaaga ama adiguba aad cunto ama aad qaadato dawo khalad ah ama sun kale, waxad la xiriir kartaa meesha, la yiraahdo (giftlinien) khadka sunta, adigoo kala xiriiriya internetka ama tilifoonka. Speak 33:06 Internetka waxad ka heli kartaa warbixin ku saabsan is-ticmaalka dawo. Halkan waxa laga helaa meele badan oo fiican, oo uu qaranku ka shaqeeyey ama uu wada shaqeyn kala yeeshay dowladda. Dhakhtarkaaga, farmasiiga iyo meelaha kale ee caafimaadka waxaad ka heli kartaa warbixin iyo caawimaad ay bixinayaan dad leh aqoon gaar ah. Afsluttende Vox pop om brug af medicin Pige 33:35 Waxan iibsaday kaniini xanuun maanta, oo caadi ah. Mand 33:38 Waxan isticmaalaa dawo subaxdii, duhurkii iyo fiidkii. Ældre mand 33:41 Waxba ma isticmaalo. Haddii aan soo iibsado hal baako oo panodil ah, waxaan hayaa 1sano iyo ½. Kvinde Yo uso pastillas para los nervios Mand 33:52 Dalka Dominikan Republik waxa aad ka iibsan kartaa dawo meel walba Side 16 af 17
17 rasiidh dhakhtareed la aan. Ældre mand 33:56 Waxan la leeyahay xiriir wanaagsan dhakhtarada. Gabadheyda aan dhalay waa dhakhtarad guud. Speak 34:10 Adiga oo kaliya ayaa og sida aad tahay. Sidaas darteed waa inaad ka fekertaa, goorta iyo sida aad u isticmaaleyso dawadaada. Side 17 af 17